Google dia manana fantsona amin'ny rindrambaiko maimaimpoana ao amin'ny Youtube | Avy amin'ny Linux
Google dia manana fantsona amin'ny rindrambaiko maimaimpoana ao amin'ny Youtube
Na dia tiako kokoa aza ny tsy matoky an'i Google sy ny "fikasany tsara", dia tsy maintsy ekena fa nanangana tetikasa loharano misokatra maro ny orinasa ary manararaotra tetik'asa marobe amin'ireto tetik'asa ireto.
Vao tsy ela akory izay, vao fantatro fa manana orinasan-dahatsary natokana hahazoana fampahalalana momba ireo lohahevitra rindrambaiko maimaimpoana ilay orinasa. Raha mbola tsy nandinika azy ianao dia mendrika ny hitsidika azy io.
El Fantsona Google ao amin'ny Youtube ao amin'ny Open Source Projects dia misy horonan-tsary avy amin'ny hetsika toa ny Google Code-in sy Google Developer Days, ary misy koa ny fanavaozana matetika avy amin'ireo manam-pahaizana momba ny lohahevitra toa an'i Chris DiBona sy ny hafa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » FampiasanaLLL's UseLinux » Google dia manana fantsona amin'ny rindrambaiko maimaimpoana ao amin'ny Youtube
tsara ho an'ny google hamoronana ity fantsona rindrambaiko maimaimpoana ity
Raha ny fahitako azy dia tsy misy ifandraisany amin'ny rindrambaiko maimaimpoana toy ny hoe misy ifandraisany amin'ny Open Source. Fa hojereko ihany 😛
Fantsona mahaliana. Efa nisoratra anarana aho. Misaotra tamin'ny fampahalalana
PM dia hoy izy:
Tsy fantatro fa nanana fantsona tao amin'ny YouTube izy ireo, ary manaraka an'izao tontolo izao Android matetika aho.
Zava-misy amin'ilay lahatsoratra, marina fa manararaotra tetik'asa maro i Google ho tombontsoany saingy aleo tsorina, tsy ONG io, amiko ny serivisy omeny ahy maimaim-poana, na dia takalon'ny fampahalalana aza .. . Heveriko fa tsara izy ireo.
Tsy nahalala an'ity bilaogy ity aho, azo antoka fa tena tsara, hitondra lahatsoratra roa ao amin'ny forum-ko aho, (nomena anarana mazava ho azy ny loharano.)
Hiverina eo aho! 🙂
Valiny amin'ny PM
Guitarix ho preamp bas